‘हाइकिङ काठमाडौँ ’ सार्वजनिक - Nature Khabar Complete Nature News
हाइकिङ विज्ञ रामदेवी महर्जनको पुस्तक ‘हाइकिङ काठमाडौँ’ शनिवार काठमाडौँमा विमोचित भएको छ । हिमालयन म्याप हाउसले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा काठमाडौँ उपत्यकाका ६४ हाइकिङ रुट, एक दर्जन होमस्टे गाउँहरूको सचित्र विवरण समेटिएको छ ।
शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ दिपकराज जोशी, प्रकृतिप्रेमी समूहका संस्थापक डा. उमेश श्रेष्ठ, समूहका अध्यक्ष रमेश चित्रकार, म्याप हाउसका निर्देशक पवन शाक्य र पुस्तक लेखक रामदेवी महर्जनले पुस्तक विमोचन गरेका हुन् ।
हाइकिङ काठमाडौँ पुस्तकमा हाइकिङ गन्तव्यको चिनारी मात्रै होइन, हाइकिङ गर्ने तरिका समेत दिइएको छ । यो पुस्तक हाइकिङका साथै साइक्लिङ, बाइकिङ, ड्राइभिङ गर्नेहरुका लागि समेत उपयोगी छ ।
‘हाइकिङ काठमाडौँ पुस्तक पर्यटन इतिहासमा एउटा ठूलो उपलब्ध हो’, पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बोर्डका सिइओ जोशीले भने, ‘यो किताब आफन्त र इष्टमित्रलाई उपहार दिन समेत उपयोगी छ ।’
पुस्तक लेखक रामदेवी प्रकृतिप्रेमी समूहकी सदस्य हुन् । समूहले ०६३ सालदेखि हरेक महिनाको चौंथो शनिबार काठमाडौँ सेरोफेरोमा हाइकिङ गराउँदै आएको छ । उसले वर्षमा दुई पटक लामो दुरीको पदयात्रा पनि गराउँछ ।
हाइकिङ काठमाडौँ पुस्तककी लेखक महर्जनले स्वस्थ पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याउन पुस्तक लेखेको बताइन् । कार्यक्रममा समूहका संस्थापक डा. उमेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष रमेश चित्रकार, उपाध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखे र पत्रकार अमृत भादगाउँलेले ‘हाइकिङ काठमाडौँ’ पुस्तक पर्यटन इतिहासमा कोशेढृुँगा भएको टिप्पणी गरे ।
प्रकाशक म्याप हाउसले हाइकिङ काठमाडौँको अंग्रेजी संस्करण प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेको छ ।